Ukuhlakanipha Akulona iBhayibheli okumelwe wangabaza ngisho yilabo abazibheki amakholwa. Ezimweni ezinzima abantu njalo ujabulela ukuphila ngaphambilini zezwe, ujike emiBhalweni ukuthola kulo induduzo nethemba. Kaningana, ukuhlupheka kufika ibinzana "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable." Kusho ukuthini? Kanjani ukuqonda futhi aphathe le nkulumo ezivamile kakhulu? Kulesi sihloko sizozama ukuqinisekisa ukuthi wena ngeke aphinde wazibuza ngalokho kuba "izindlela inscrutable likaJehova."
IBhayibheli - wokuhlakanipha
Abashumayeli bathi uNkulunkulu unguZiqu umuntu ogxilisa ngokwalo ngesikhathi esifanele ukuze iBhayibheli futhi kwembula kuye ukuthi ikhasi efanayo, umugqa okuzokwenza uthele namafutha phezu umphefumulo kwabonayo. Ngakho ungacabangi ngokuthola inkulumo ethi "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable" emBhalweni, ukuthi lisho ukuthini. Qiniseka - ke kuhlobene ngokuqondile ukuphila kwakho futhi izenzakalo ezenzeka kuwo. Uma bekungenjalo, bengiyakunitshela ukuthi kungani balinqaka iso lami esifanele wena?
Akuwona wonke umuntu emgwaqweni uyaqonda ukuthi kusho ukuthini inkulumo ethi "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable." Ngisho nabantu abambalwa ukuthi livelaphi lapho. Ake sicacise lokhu ndaba eyinkimbinkimbi.
Lapho inkulumo ethi "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable"?
Lokhu ibinzana isetshenziswa nabefundisi kanye abavamile ezivamile. Ngokuvamile isetshenziswa njengoba amazwi enduduzo yokushumayela nokuhlangana ingxoxo siqu. Bambalwa abantu abacabanga, lapho eTestamenteni Elisha lingatholakala futhi ngayiphi ingqikithi yasetshenziswa ngokokuqala ngqa.
Uma uvula iBhayibheli ku Epistle of St uPawulu awabhalela abaseRoma, uzothola khona umbhalo elandelayo: "O ukujula kwengcebo nokuhlakanipha nolwazi lukaNkulunkulu Yeka izahlulelo zaKhe futhi engaqondakali ezindleleni zaKhe!" Leli vesi kungase kubhekwe njengokwelapha kokusetshenziswa kokuqala kwe-ke ngenkulumo ethi "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable", ukubaluleka okungadingi ukushintsha indlela okubekwe ngayo inkulumo.
Iqiniso lokuthi nokuchazwa eziningi mazwi avela eBhayibhelini ayinakho analogue ngolimi Russian. Ngakho-ke, abefundisi bama-Orthodox kwadingeka ukuba ukhethe ecacile naseduze Ukushaywa amazwi-esikhundleni. Akumangazi ukuthi le nkulumo waseBhayibhelini usebhekene izinguquko ezithile manje umsindo ehlukile kunaleyo umthombo oyinhloko.
Kusho ukuthini inkulumo ethi "Inscrutable izindlela zabo eNkosini '?
Kunzima ukuchaza ukuhlakanipha kweBhayibheli, ngoba abashumayeli bakholelwa ukuthi kubalulekile ukuba ngiziqonde umphefumulo kanye inhliziyo. Kodwa thina namanje zama ukuqonda incazelo yenkulumo ethi kweqiniso.
Uma ngokucophelela ufunde yokuqala, okungukuthi, eTestamenteni Elisha, kuyacaca ukuthi umphostoli uPawulu iyalwazisa imiklamo kaNkulunkulu. Yena ayinikezi zokulandelela icebo lakhe, futhi uyaqaphela ukuthi zingabantu kanzima kuqondwe umuntu ovamile. Futhi musa sizame ngisho nokuzama ukuqonda indlela uNkulunkulu iyokuhola ngokusebenzisa. Ngaphezu kwalokho, abamemezeli abangaphezu abaningi abangamaKristu ukuxwayisa abantu abavela ukuzama ukubheka ku izinhlelo kaNkulunkulu. Kungenjalo, ukuziqhenya yomuntu kungenziwa ijeziswe, ngakho inkulumo mayelana womuntu nemishwana kwenchubo abuphenyeki.
Ngo yolimi lwanamuhla Russian igama elithi "untraceable" Sekuyisikhathi eside Limiselelwe "engaqondakali". Kuyinto sobala kakhulu umsindo kanye nencazelo ibinzana ayiguquki - umuntu kumelwe sithembele kuNkulunkulu futhi konke okwenzekayo empilweni yakhe, abasamukela ngokwazisa nokuthobeka. YiNkosi othobekile zemiBhalo wembula izinhlelo zakhe, kodwa ngaso sonke isikhathi.
Uma namanje kunzima ukuqonda ukuthi kusho ukuthini inkulumo ethi "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable" ke acha- isaga ethandwa ngokulinganayo owaziwa, "Konke kwenziwa - zonke kangcono." Zombili lezi zinkulumo zibonisa ukuthi konke kuhamba kahle ekuphileni kuhamba njengoba uhlelo uNkulunkulu nentando yakhe nje kudingeka sithembele.
Ngamuphi umqondo isetshenziswa ibinzana ezivamile kweBhayibheli?
Sesiyazi baqonde basuka kuphi kule "abantu", le nkulumo ethi "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable." Kusho ukuthini lokhu kuleli zwe lanamuhla? Uhluke ngani ukuqonda lanamuhla okuvela kuyo le nkulumo zabantwana amaKristu obu-Orthodox emakhulwini eminyaka adlule? Abefundisi bakholelwa ukuthi umehluko libalulekile.
Ngaphambili, abantu omethembayo kalula imiklamo kaNkulunkulu futhi balalela bonke izinguquko ekuphileni kwakhe. Amakholwa ayeqiniseka ukuthi phezu kwabo ukuba izinto zenziwe ngendlela yalo, futhi kuphela kuholela ngukusindiswa komphefumulo. isifiso Cishe ngingekho ukuphikisana noNkulunkulu futhi Eyayikuhlela. Kukhona amacala lapho lokhu kulingwa ezimbi kakhulu eyawela isabelo indoda, lidlule ngenhlonipho, umthandazo kanye nokubonga, bayiswa ileveli entsha yokuphila komuntu. Bese abantu wathi lokuthi uNkulunkulu waletha enjabulweni yomuntu, noma awasho, ukuthi izindlela zikaNkulunkulu inscrutable. Kusho ukuthini lokho, akekho ngisho ukuthi lokho kwakuyisiqalo ukholo oluqinile kanjalo izinhlelo kaNkulunkulu.
Yiqiniso, manje, bambalwa abantu abakwazi ukuqhosha nokholo oluqine kangangokuthi. Shono izinkinga eziningi kangaka futhi ngamashwa zenzeka ezimpilweni zabantu. Ngokusho abapristi - inqobo nje umuntu akusho anikele ukuphila kwakhe ezandleni zikaNkulunkulu futhi ngeke kudlule bonke mlando okuhleliwe emkhondweni, kuyothiwa ihlolwe. Kuleli zwe lanamuhla sivame ukusho ibinzana odumile njengoba uzwela noma induduzo lapho ungazi kanjani lesi sigameko ezingemnandi futhi ukhuthaze umuntu. Akusho akuzwakali ukuba sibe nokwazisa walo wangaphambili futhi ahloniphe icebo likaNkulunkulu, kuphela ukuqashelwa lobuthakathaka yayo futhi bakha ukuba sengozini yokutheleleka kwamandla ombuso.
"Izindlela zikaNkulunkulu inscrutable" - eliyisisekelo ubuKristu ibinzana
Izazi eziningi ngonanzelelo ekutadisheni iBhayibheli, ukukholelwa ukuthi ukhona uhlu imisho ukuthi umhlabeleli elichaza okushiwo ubuKristu. Lisho ukuthini inkulumo ethi "izindlela zikaNkulunkulu inscrutable" kulo mqondo?
Zonke phezu lula, kodwa ngesikhathi esifanayo Akumangalisi okunzima ukuyiqonda nokuzibamba izakhamuzi uyazethemba kwekhulu lamashumi amabili nanye. Izazi zemfundiso yenkolo ukuthi ukuthobeka phambi kukaNkulunkulu lubonakaliswa ayasazisa konke kuphila. Ngoba uNkulunkulu kuphela owazi esidlule, zamanje nezesikhathi esizayo. Uyazi ukuthi angayisebenzisa kanjani izingozi zokweqisa nezilingo, noma ngendlela okumelwe uhambe ngayo. Ngakho-ke, wachaza ngemifanekiso eminingi, njengoba kudingeka ukuze aphumelele kulesi sivivinyo ukuze uthole injabulo. Bayakwazi njengesifenqo ukudlulisela ukubaluleka yeNkosi.
Umzekeliso umdala kanye Angels
On isihloko lesi sihloko, zikhona zinganekwane eziningi, kodwa umzekeliso elimibalabala kakhulu uchaza ukuthi kuncane kangakanani sibona futhi ingazi ukuthi kwenzekani esizungezile. Ngokusho lo mfanekiso, ohlakaniphile asebegugile ixhegu bengaqondi nokungabi nabulungisa kwezwe lethu futhi njalo bakhala kuNkulunkulu bacela ukuthi imibuzo ezililweni. Ngelinye ilanga wathola eziningi ingelosi, owayala umuntu omdala ukugibela esihlahleni izinsuku ezintathu bese ubuka ukuthi kwenzekani ezansi. Nomfundisi walalela ngosuku lokuqala wabona umgibeli ocebile elahlekile esikhwameni egolide. Ngosuku lwesibili ngithole umlimi igolide, elala ngaphansi kwesihlahla ukudla. Ngosuku lwesithathu isinxibi wafika esihlahleni futhi baqala ukudla ngobugovu ukudla, ukhohlwe umlimi bajabule. Kodwa lweshwa lakhe umgibeli wabuya futhi wabulala abampofu, bekholelwa ukuthi akuntshontshile isikhwama semali elahlekile. Ukulandela lezi zenzakalo, leli xhegu wehla esihlahleni e izinyembezi nentukuthelo ejulile. Wayekulungele ukuba balahle ukholo lwakhe, ngibona kungabi nabulungisa, kodwa ingelosi yamkhuza futhi wachaza ukuthi kwakwenzekani enkundleni. Wathi umgibeli ocebile - umkhuba ononya umthelisi ngubani bonakalisa abantu. Wabulala wesigebengu abaye bakhulekela ukufa ukuze kuhlawulelwe izono zazo zangesikhathi esidlule. Ngemva intela ukubulala ngalendoda siyaphenduka ngenxa yezenzo zabo futhi baphendukele kuNkulunkulu. Umlimi u cishe zonakale izintela eqolo, nesikhwama igolide ukusindisa umkhaya wakubo ezithile zokufa.
"Izindlela zikaNkulunkulu inscrutable" - lokho kusho, sicabanga, kuyokhanya ngaphezulu ngemva kokufunda lo mfanekiso olandelayo.
Iphupho indela unkom 'idlayodwa
Kwelinye emihumeni iminyaka eminingi ngokukaNkulunkulu ekulungeni ngomthandazo Ngahlala indela-unkom 'idlayodwa. Kodwa akazange adikibale ukuphumula ngezinjongo zikaNkulunkulu, wayefuna ukungena essence zabo futhi babe nolwazi. Uma ephusheni + umuntu othile wasondela kuye, wabiza kuye. Monk wahlangana naye endleleni izinsuku ezintathu, futhi ngamunye kubo wamletha ngokuya ekhungathekile okholweni lwabo. Ngobusuku bokuqala esihambele engumngane indela weba ephethe indebe yegolide yendlu ongumlimi, umakhelwane ezinikelwe behlonipha nokubuyisana ngemva ukuxabana eside. Ngemva ebusuku wesibili yena eqhugwaneni wokhelwa uvikelekile kubo ompofu. Futhi ekuseni ngosuku lwesithathu ngacela Kuqondisa indodana ka Omunye wabalimi, obanika yokukhosela, kwachitheka ke emfuleni zeziyaluyalu. Zonke ngesiphazamiso Monk yena wacindezela ibinzana imiklamo kaNkulunkulu.
Ekupheleni komgwaqo indoda wavula leli xhegu okushiwo lwezinto ezenzeka phakathi nohambo kweqiniso. Kwabe sekuvela ukuthi, indebe yegolide wadliswa ushevu, nomlotha ikhaya lakhe isinxibi uthola umcebo ocebile efihlwe okhokho bakhe, futhi izoshintsha ngokuphelele ukuphila kwakho. Ingane encane owashona ngo ngokugqugquzela zikayise ube isigebengu begazi futhi ukubulala izinkulungwane imiphefumulo engenacala. Ngemva kokufa uwukuphela kwendodana uyise kuyoba sidabukile kakhulu futhi kuyoba indoda abangcwele kakhulu endaweni yakubo. Uyokwazi ukusiza eziningi izeluleko ngesenzo afele yokuguga.
Ngemva le ndaba indoda ongaqondakali seliphelile, futhi indela waphaphama. Kusukela ngaleso sikhathi, uye wafunda nethembe uJehova ngaphandle kokubuza incazelo.
Efingqa konke okulotshwe, ngifuna ukusho ukuthi ukukholelwa kuNkulunkulu kudinga ukuthembela ngendlela engenangqondo. Ungabheki injongo kwenzekani ekuphileni kwakho. Phela, ngisho izimo ezingezinhle kuholele enesiphetho esijabulisayo. Ungavumeli ukuqhosha futhi ungazami ukunquma isiphetho sabo. Khumbula - UNkulunkulu usebenza ngezindlela eziyimfihlakalo.
Yikuphi isithonjana ukuthandaza abesifazane abakhulelwe? Isithonjana kwabesifazane abakhulelwe: umlando, incazelo
Emthethweni: bangobani - bigots noma amaqhawe?
Yini amazinyo kangcono unamathisele? ukukhetha impahla
Hockey - izinhlanzi umndeni merlucciidae. Kunalokho ziwusizo, noma kungaba ekulimaleni, nokuthi ukulungiselela kangcono?
Ungaqala kanjani usuku lwakho ukuze luphume?
Uwoyela Apricot: izakhiwo yezimonyo
Isipho esikhulu: indlela ukupakisha nezamanje
Okungikhathazayo enhliziyweni - Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Ukukhangisa kwezezimali = ukutshalwa kwezimali ezingenzekayo + izingozi
The best imenenja yefayela for ipad